विचित्र संसार – Page 8 – Lokpati.com
नेपाली काँग्रेस राशिफल अपराध अमेरिका प्रचण्ड चितवन नेकपा सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली पक्राउ प्रधानमन्त्री
गर्भभित्रै जुम्ल्याहा बच्चाको कुटाकुट, (भिडियोसहित)
(एजेन्सी) । एक चिनियाँ महिलाको गर्भमा रहेका जुम्ल्याहाले आपसमा कुटाकुट गरेको ‘अल्ट्रासाउन्ड’ भिडियो भाइरल भएको छ।नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ती महिला अस्पताल गएको बेला उनका पतिले उक्त भिडियो लिएका थिए। ताओ नाम गरेका उनले भने,…
एजेन्सी । मानव जिन बाँदरको मस्तिष्कमा हालिएपछि बाँदर बुद्धिमान देखिएको छ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले बाँदरको मस्तिष्कमा मानव जीन मिसाइदिएका हुन्। गत महिना बेजिङको नेसनल साइन्स रिभ्युले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा ११ बाँदरमा मानव जीन हालिएको…
दश वर्षे बच्चाकाे आफ्नै वायुसेवा कम्पनी, आफैं छन् सिइओ
काठमाडौं, ०१ चैत । मान्छेहरुले भन्ने गर्छन् नदेख्नु सपना देखिसकेपछि ठूलै देख्नु। नेपालीमा एउटा उद्यगार नै छ नि उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भन्ने। अष्ट्रेलियामा एकजना १० वर्षका बालकले यस्तै सपनालाई सार्थक बनाउने प्रयास गरेका छन्,…
विज्ञानकाे चमत्कार: अब बाँदर पनि मान्छेजस्तै वुद्धिमान्
एजेन्सी । चीनले विश्वकै अनौठा र आश्चर्यजनक प्रयोग गरेर मानिसलाई अचम्ममा पारिरहेको हुन्छ । विश्वमै अनौठा र आश्चर्यजनक प्रयोग गरेर सफलता चाख्दै आएको चीनले फेरि एउटा आश्चर्यजनक प्रयोगमा सफलता प्राप्त गरेको छ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले हालसालै…
चमत्कार ! बाझोपन भएकी महिलाले कसरी जन्माइन् शिशु ?
एजेन्सी । बाझोपन भएकी एक महिलाले शिशु जन्माएकी छिन् भन्दा अचम्म लाग्ला तर, ग्रिसका प्रजनन डाक्टरहरुले नयाँ चिकित्सकीय पद्धतीको प्रयोगबाट बाझोपन भएकी महिलाको गर्भबाट शिशुको जन्म गराएका छन्। नयाँ आइभिएफ पद्धतीअनुसार डाक्टरहरुले बच्चा जन्म…
एजेन्सी । सामान्यतया इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सन्जालमा सबै भन्दा बढी फलोअर्स कसको हुन्छ ? सबैको साझा उत्तर हुन्छ सेलिबे्रटी तर, सुन्दा अचम्म लाग्ला एक वर्षिया एक बालिकाले सो रेकर्ड तोडेकी छिन् । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर जापानकी एक…
कस्तो होला खान मिल्ने कपडा ?
काठमाडौं, २६ माघ । उत्तर कोरियाले खान मिल्ने कपडा बनाएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने, कपडा पनि खान मिल्ने । भोकमरीसँग जुधिरहेको उत्तर कोरियाले प्राण धान्न खानमिल्ने कपडा बनाएको हो । उत्तर कोरियाको किम क्लोथिङ्ग अनुसन्धान केन्द्रले ती अनौठा…
टोकियो, जापान । जापानका एकजना सुसी व्यवसायीले टोकियोमा खुलेको नयाँ माछा बजारमा शनिबार एउटा विशाल टुना माछा ३१ लाख अमेरिकी डलर (रु. ३४ करोड ७२ लाख) मा खरिद गरेका छन्। जापानमा एउटै माछाको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी भाउ हो। यो माछा प्रतिकेजी…
वैज्ञानिकहरुको दावी : ‘आफू मरेको मस्तिष्कलाई थाहा हुन्छ’
मङ्सिर २९, काठमाडौं | मानव मस्तिष्कले मृत्यु भएको केही मिनेटसम्म थाहा पाउने भन्दै केही वैज्ञानिकहरुले पुष्टि गरेका छन् । जब कि कसैको शरीर मृत्यु भएको छोटो समयसम्म आफू मरिसकेको भन्ने सूचना पाउने उनीहरुले पत्ता लगाएका हुन् । अमेरिका र…
ब्वाइफ्रेण्ड नखोजिदिने कम्पनीमाथि मुद्दा
ब्वाइफ्रेण्ड नखोजिदिएको भन्दै एक महिलाले कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हालेकी छन् । पारपाचुके गरेर एकल जीवन बिताइरहेकी र धनी ब्वाइफ्रेण्डको खोजीमा रहेकी महिलाले ब्वाइफ्रेण्ड पाउन नसकेको र यसबाट आफूलाई नोक्सानी भएको भन्दै कम्पनीमाथि मुद्दा हालेकी…